သင့်ရဲ့အိမ်သာစက္ကူသင့်အကြောင်းမိန့် - သတင်း Rule
သင်တို့အပေါ်မှာသို့မဟုတ်အောက်မှာလှိမ့်ချလိုက်ပါနဲ့? သငျသညျအိမျတျော၌အသေးငယ်ဆုံးအခန်းသို့သွားရောက် Next ကိုအချိန် loo လိပ်မှာကြည့်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “သင့်ရဲ့အိမ်သာစက္ကူသင့်အကြောင်းမိန့်” ဘင် Ambridge ကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္ဂနွေ 27 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ် Observer များအတွက် 2015 08.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဟမ်း - - ဤရက်သတ္တပတ်၏နည်းနည်းပြုစေလိပ်ကစား. ဘယ်လိုသင့်ရဲ့အိမ်သာလိပ်ဆွဲထားဖို့ပိုနှစ်သက်ကြပါ? ဝေးမြို့ရိုးမှဖြစ်ဖို့အချောင်အဆုံးကဲ့သို့သင်တို့ပြုပါ (အကျော်စတိုင်) သို့မဟုတ်ထိုအုတ်ရိုးဘေးမှာ (ထိုအောက်တွင်စတိုင်)?
အခုအဘယျသို့ဒေါက်တာ Gilda Carl ကြည့်ရအောင် ("ကြယ်မှဆက်ဆံရေးကိုကျွမ်းကျင်သူ") သင့်ရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပြောရရှိပါတယ်.
သငျသညျကျော်လှိမ့်နေလျှင် ... တာဝန်ခံယူပြီးကဲ့သို့သင်တို့, အဖွဲ့အစည်းကတပ်မက်ခြင်းနှင့် overachieve ဖို့များပါတယ်.
သငျသညျအောကျ၌လှိမ့်နေလျှင် ... သငျသညျထားကြ၏-ပြန်နေ, အားကိုးနှင့်ခိုင်ခံ့သောအမြစ်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုရှာခြင်းငှါ.
သငျသညျဂရုမထားဘူးဆိုရင်, အဖြစ်ကြာမြင့်စွာကအဲဒီမှာရဲ့အဖြစ် ... သငျသညျပဋိပက္ခ minimize လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထား, တနျဖိုးကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အသစ်အခြေအနေများတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချပြီးတူ.
ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ဝင်ငွေတန်ခိုးတော်အကြောင်းတစ်ခုခုပြောပြနိုင်? တစျခုမှာအမေရိကန်စစ်တမ်းကတွေ့ရှိခဲ့သည် 73% အောက်မှာဝင်ငွေသူတွေကို၏ $20,000 အောက်မှာလှိမ့်, စဉ် 60% ကျော်ဝင်ငွေရသူမြား၏ $50,000 မှောက်သည်. ဤရွေ့ကားစစ်တမ်းများအတော်လေးသိပ္ပံနည်းကျစိတ်ပညာလေ့လာမှုအဘို့လိုအပ်သောစံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီပါဘူး - ဒါပေမဲ့ဒီကော်လံကသငျသညျဆငျခွငျဖို့တစ်ခုခုအားငါပေးမည်ကိုဖတ်ရှုသင့်အကြိုက်ဆုံးရေချိုးခန်းပါလျှင်.
ဤဆောင်းပါး၏တစ်ဦးအပြည့်အဝကိုးကားဗားရှင်း, ရန်သွား benambridge.com. Fancy အချို့သောပိုပြီးဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ? အမိန့် Psy-Q ဘင် Ambridge အားဖြင့် (ပရိုဖိုင်းကိုစာအုပ်များ, £ 8,99) မှသို့မဟုတ်£ 6,99 bookshop.theguardian.com
← သမ္မာတရားကိုထွက်ရှိဟုန်းဟုန်းဖြစ်ပါတယ်: အဘယ်ကြောင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကြံပိုမြန်ယခင်ကထက်ပြန့်နှံ့ 2015: ယခုနှစ်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတစ်ခု gimmick ဖြစ်ခြင်းရပ်တန် →